9 Maturu Ekushambadzira Ekukubatsira Iwe nekukurumidza Gadzira Zvirinani Blog Zvemukati | Martech Zone
Svondo, Ndira 27, 2019 Svondo, Ndira 27, 2019 Becky Holton
Ndeipi poindi yekushambadzira zvemukati?
Izvo ndezve kungogadzira hukuru hwemukati uye nekuisimudzira mumigwagwa yakawanda kuti uwane vateereri vako?
Zvakanaka ndicho chikamu chikuru. Asi zvemukati kushambadzira zvakadarika izvo. Kana iwe ukaganhurira maitiro ako kune izvo zvekutanga, iwe uchaongorora analytics uye iwe unozoona kuti izvo zvemukati hazvina kukwezva akakosha traffic.
ClearVoice vakaongorora vatengesi chiuru kuti vazive kuti ndeapi makuru matambudziko emukati. Rondedzero yematambudziko makuru yaisanganisira zvemukati zvemukati, kugadzira uye kuyera zvemukati, asi zvakaramba zvichienderera mberi.
Nguva, kunyanya, ndiyo yakanyanya kunetsa. Asi vashambadziri vakarwawo nekugadzira mazano, tarenda, kugovera, zano, kuita, uye kuenderana. Kana zvese izvi zvinhu zvikaiswa mune yakatarwa nguva, tinosvika padambudziko.
Saka isu tinoona kuti zvemukati kushambadzira, mune kwayo kukosha, kwakaomesesa kupfuura vazhinji vedu tinotarisira. Iwe unofanirwa kupinda mune inoshanda-inotyairwa mindset kuti uite zvese zvinangwa mukati menguva yenguva yaunogadza.
Zvishandiso zvakakodzera zvinobatsira neizvozvo!
9 Zvemukati Zvekushambadzira Maturu Ekubatsira Iwe Kukunda Kukundikana Kwenguva
Sangana naEdgar - Iwe unoda kuve wakanangana nekuvandudza yakakura blog zvemukati. Kana mumwe munhu (kana chimwe chinhu) akatarisira chikamu chekuparadzira, iwe unowana yakawanda nguva yekutarisa pane ako anotevera kutumira. Edgar chishandiso chinobatsira chaunoda. Iwe ucharonga zvakatumirwa mune yayo system, uye ipapo Edgar anozozvinyora otomatiki mamiriro emamiriro e Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, uye Pinterest. Chishandiso chakanakira kudzokororazve girini zvirimo. Izvi zvichaita kuti chiratidzo chako chigare chakakodzera kunyangwe iwe usiri kuburitsa zvemukati zvitsva kazhinji sezvaungade.
Quora - Paunoshaya mazano ezve misoro yekunyora pairi, bharoka remunyori rinogona kutora nguva yakawandisa. Unowana kupi mazano aya? Iwe waigona kuona izvo vakwikwidzi vako vanyore nezvazvo, asi iwe haudi kutevedzera ivo. Heino iri nani sarudzo: ona izvo zvinangwa zvako vateereri zvinoshamisika nezvazvo.
Tarisa mibvunzo iri muchikamu chakakodzera cheQuora, uye iwe unobva watora mashoma mazano emusoro.
Pablo - Izvo zvinoonekwa zvemukati zvemukati zvine basa zvakanyanya. Iwe uchazoda akasiyana magiraidhi kana mifananidzo yeFacebook, Pinterest, Google+, Instagram, uye dzimwe dzese nzira dzaunonangisa.
NaPablo, icho chikamu chebasa rako chiri nyore. Iwe unogona kugadzira zvinoyevedza zvinoonekwa pane yega yega posvo. Kune anopfuura makumi mashanu emifananidzo mu raibhurari, saka unogona kuwana zviri nyore zvinoenderana nezvako zvemukati. Ipapo, iwe unogona kuzvisarudzira nemakotesheni kubva kune iyo posvo, uye sarudza saizi yakakodzera kune akasiyana masocial media network.
Hemingway App - Kugadzirisa kunotora nguva yakawanda, handizvo here? Paunenge wapedza kunyora iyo blog positi, iwe = unoda kukurumidza kupfuura nayo uye kuitisa kuti ibudiswe. Asi iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa danho; zvikasadaro unoisa panjodzi yekushambadzira madhizaina asina kukwana nemhando inokanganisa.
Hemingway App inoita kuti chikamu chebasa rako chive nyore sezvachinowana. Inobata girama uye zviperengo zvikanganiso. Asi hazvisi izvo chete. Chishandiso chinokuyambira zvakare nezve kuomarara, zvirevo, uye zvimwe zvinhu zvinosanganisa meseji.
Ingo tevera kurudziro uye ita kuti zvemukati zvive nyore kuverenga.
ProEssayWriting - Iwo akanyorwa-pamusoro maturusi anokubatsira iwe kubata akasiyana maficha eako zvemukati mushambadziro wekushambadzira, asi zvakadiniko nechikamu chekunyora? Iwe unoziva iwe haugone kunyatsovimba nesoftware kana zvasvika pane izvo.
Asi pane imwe nguva kana imwe, unogona kusungwa. Iwe une yakarongedzwa zvirimo zvemukati asi iwe haugone kubata kunyora zvese zvinyorwa nenguva. Pamwe iwe uri pakati pevharori yemunyori. Pamwe zviri kungoitika hupenyu uye iwe unofanirwa kuisa kunyora pazororo.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, nyanzvi yekunyora sevhisi inogona kubatsira zvakanyanya. ProEssayWriting ipuratifomu yaunogona kukwereta nyanzvi vanyori kubva mumapoka akasiyana. Iwe uchavapa iwo iwo mirairo uye ivo vanoendesa 100% yakasarudzika yezvinyorwa nenguva yako yekupedzisira.
Akanaka Mitauro - Akanakisa Mitsara nderimwe basa rine mukurumbira rekunyora zvemukati. Iwe unogona kuraira blog positi pane chero nhaurwa, kupihwa chokwadi chekuti kambani inoshandira vanyori vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzekufunda. Best Essays akanaka kune epamusoro-mavara machena mapepa uye maEbooks, asi iwe unogona zvakare kuwana zvakapusa zvidimbu zvemukati pese paunenge uchizvida.
Iyi sevhisi inoita kuti iwe ugadzire chaizvo mapfupi mahedhiyo (kubva pamazuva gumi kusvika kumaawa matatu), uye iwe unowana garandi yekuendesa nenguva.
Yakakwirira Mapepa - Kana iwe uchironga kuendesa izvo zvemukati kunyora chikamu pane iyo yakareba kwenguva, Superior Mapepa inzira huru sarudzo. Paunosarudza nhengo yaRuby kana yeDiamondi, unenge uchiwana zvikwereti nguva dzose. Uyezve, iwe unozosvika kushanda nevanyori vakanyanya kubva kuchikwata.
Kana iwe ukatanga kushandira pamwe nemumwe munyori uye iwe uchida izvo zvaunowana, unogona kukwereta imwe nyanzvi zvakare.
Pamusoro pekunyora rubatsiro, Superior Mapepa anopawo mabasa ehunyanzvi ekugadzirisa.
Brill Basa Rekunyora Sevhisi - Iri ibasa rekuBritain rekunyora. Kana bhurogu yako yakanangana nevateereri veBritish, munyori weAmerica haazombonyatso mutora. Muchiitiko ichocho, Brill Assignment ndiyo sarudzo yakanakisa.
Vanyori vanounza zvemhando yepamusoro zvemukati pamhando dzese dzemusoro wenyaya. Kuwedzera kune blog zvinyorwa, iwe unogona zvakare odha kesi zvidzidzo, PowerPoint mharidzo, graphic dhizaini mapurojekiti, uye zvimwe.
Zvinyorwa zveAustralia - Zvinyorwa zveAustralia isangano rekunyora rakafanana nevamwe vashoma vatataura pamusoro. Musiyano, sekureva kwezita chairo, nderekuti iwo unonanga musika weAussie. Saka kana iwe uchida vanyori vanobva munyika ino kuti varove iwo chaiwo masitayera, ndipo paunowana ivo.
Iyo mitengo yatove inokwanisika, asi iyo kambani zvakare inopa yakanyanya kuderedzwa kune vese vanogara vashandisi.
Kuchengetedza nguva chinhu chikuru. Paunoita yako yemukati yekushambadzira mushandirapamwe kuti ubudirire, iwe unozotanga kuwana traffic uye kugutsa vateereri kuti vatore matanho. Ndinovimba, maturusi akanyorwa pamusoro achakubatsira iwe kusvika ipapo.
Tags: zvinyorwa zveAustraliarondedzero dzakanakisabrillbrill basa rekunyora basaContent Marketingzvemukati zvekushambadzira zviwanikwazvemukati masevhisihemingway appsangana na edgarPabloakakwirira mapepa
Becky Holton mutori wenhau uye blogger. Anofarira hunyanzvi hwekudzidzisa uye anogara akagadzirira kutsigira kutaura kunodzidzisa.